Yongeza ukhuseleko lweWordPress > UVielhuber uDavid
Yongeza ukhuseleko lweWordPress09
Ukhuseleko lwenkqubo yolawulo lomxholo ngoku ethandwa kakhulu yiWordPress inokunyuswa ngokubonakalayo ngokuguqula izikrufu ezimbini ezincinci. Ithatha kuphela imizuzu emi-5 kunye nemigca emibini yekhowudi. Nangona ingxaki inokusonjululwa ngeendlela ezahlukeneyo zeeplagi, ndizikhawulela ngabom kwizisombululo ezingenasiplagi.
Kwelinye icala, i-meta tag ityhila
Inguqulelo yamva nje kwaye inokufundwa ngokulula kusetyenziswa iscraper. Ukuba umngxunya obalulekileyo wokhuseleko uvele kuhlobo olukhethekileyo lweWordPress, kulula ukulandela umkhondo wamawaka eewebhusayithi ngokuchanekileyo ngolu hlobo. Ke ngoko kufuneka ususe ulwazi ngale hook:
Ingxaki yesibini kukuthetha kwideshibhodi.Ukuba ufuna ukungena, ulwazi lubonelelwe ngokungangqalanga malunga nokuba igama lomsebenzisi likho na. Imiyalezo yempazamo inokusetyenziswa ngokulula kwiinkqubo ezifanelekileyo ukunyusa ukubakho kokuhlaselwa ngokuhlaselwa ngamandla. Ke ngoko kuya kufuneka uthathe inyathelo apha kwaye ufake oku kulandelayo:
Amanyathelo akhankanyiweyo anyusa ukhuseleko lwebhlog yakho kwaye kulula nokuzalisekisa I-WordPress ithathwa njengekhuselekileyo kuqwalaselo lwayo oluqhelekileyo, kodwa ukusetyenziswa kwayo ngokubanzi kunye nokuthandwa kuthetha ukuba kugxilwe ngokuphindaphindiweyo ngabahlaseli.